Saalax Badbaado Imisa Ayuu Dilay? W/Q Eng Khaliif Muumin – Calamada.com
Saalax Badbaado Imisa Ayuu Dilay? W/Q Eng Khaliif Muumin
calamada August 3, 2016 6 min read
Maskaxdu waxey ku dhaweyd iney rumeysan wayso wixii dhaguhu ay maqleen, warkii la baahiyay wuxuu inagu reebay wareer, waxaad mooddaa in maskaxdeena yar ta ah ay qaadi weysay canaawiinta akhbaartii ka baxeysay warlalisyada ee sida wada jirka ah ugu xoomay magaca hal qof.
Wax cusub oo la qariibsado maaney aheyn qarax ka dhacay Muqdisho, sidoo kale in nuuca qaraxaasi yahay Istish-haadiyo ayaan aheyn mid nagu cusub, laakin wareerka safmareenka noqday ee maskaxdu xamili weysay ayaa ahaa in dadkii sameynayay markan falka qaraxyada uu ku jiro nin xildhibaan ahaan jiray!.
U fiirso, marka halkan aan tilmaamayo magaca Xildhibaan ma ahan in sharaf iyo maamuus aan siinayo magacaas; waayoo dadka yaqaana Cilmiga Luqadaha waxey sheegaan in waxa qof looga sooco dadka kale ay noqon karaan amaan ama caay, wanaag ama xumaan.
Marka aan hadda soo qaadanayo magaca Xildhibaan waxaan uga dan leeyahay tilmaanta xumaan meesha ugu sareysa, laakin adeerkey Saalax Badbaado wuxuu ku sharfan yahay inuu dadka kale kaga soocan yahay, ahaanshihiisa: qof xumaan daran ka soo baxay oo tiigsaday sharaf aad u sareysa.
Tusaale: Haddii la dhaho: Imaamkii Masjidka ayaa kaalin muuqata ka qaatay Jihaadka waa wax la filan karo oo la fahmi karo, laakin xildhibaankii Baarlamanka ayaa kaalin mug leh ka qaatay Jihaadka ayaa ah mid qariib ah; sidaas darteed Saalax wuxuu ka mudan yahay amaanta iyo sharfidda Imaamka Masjidka, labadoodana Kheyr way helayaan Insha ALLAH.
Saalax Badbaado, oo aan maqlay magaca Badbaado iney ka soo raacday xil uu ka soo qabtay Dawladdii Shuuciga isagoo ku sugan gobolka Togdheer, wuxuu ka dhignaa mucjiso, marka laga eego dhinacyadan soo socda:-
1-Sooyaalkiisii Siyaasadeed iyo qaabkii uu ku soo afjaray.
2-Goâ€™aankiisii qaraaraa iyo sidii uu ugu adkeystay
3-Qirashadiisii qaladkii uu ku jiray iyo sida adag ee uu kaga soo laabtay
4-Noloshii adkeyd ee uu ku maray Jihaadka iyo siduu ugu soo dhabar adeygay
5-Khaatumadii uu doortay inuu ku dhameysto cumrigiisa isagoo 60 jir ku dhow.
Qodobbadaasi oo idil waxey mudan yihiin mid mid in loo dul istaago, laakin waxaan rajeynayaa in ay ku filan tahay tilmaan halkii la turxaan bixin lahaa.
Waxaan maqlay in Saalax markii uu goâ€™aan ku gaaray ka bixitaanka maamulka Federaalka, wax yar iney ka harsaneyd xilliga ay Xildhibaannadu qaadan lahaayeen mushaaraadkoodii ay muddo sugayeen; kuwo qaar ayaa kula taliyay inuu iska sugo oo markuu lacagta qaato iska baxo, laakin ninku maaney u muuqan adduunyo ee Aakhiro ayuu eeganaya sida aan rajeyneyno.
Kiisaska Saalax oo kale, baaritaannada lagu sameeyo waxey sababaan wax weyn iney ka badalaan hannaanka Muâ€™assasaat dhan oo dib markaas loogu laabto howshooda, arrinkaasna waa mid u yaalla cadowgii uu weeraray Saalax oo dadka Halganka kala soo horjeeda ugu yeera mar waliba: Caruur la soo qalday.
Hadda kiiskan caruur lama oran karo ileen Saalax 60-jirrada ayuu ku jiraa, sidoo kale waa la soo qalday lama oran karo waayoo Saalax khibrad ku filan dhanka nolosha wuu soo arkay!.
Noolaha oo dhan way dhintaan dhamaantood, laakin way ku kala duwan yihiin sababta, sidaas oo kale way ku kala duwan yihiin mustaqbalkooda Aakhiro. Dad badan ayaa Adduunyada ka taga oo waxna reebin, kuwa qaarna adduunkana waxba kuma reebaan, Aakhirana waxba ugama horreeyaan.
Laakin dadka qadiyadaha leh ee waliba qadiyadahooda u dhinta ayay geeridoodu isu badashaa nolol kale; waxaad moodeysaa in erayadoodii, dhaqannadoodii iyo mawaaqiftoodii ay dib u noolaanayaan, kuwaas waa kuwo ALLAH ku sharfay Adduunyo iyo Aakhiro.
Sidaas darteed dadka ceynkaas oo kale maalinta geeridooda ayayba guusha dhadhansadaan, waayoo waxa ugu qaalisan ee qadiyaddooda ay u bixin kareen ayaa aheyd naftooda, dad bandanna arrinkaas naftooda way u soo diyaariyeen laakin bixinta iyo qaab bixinta ayaa lagu kala hormaray.
Saalax, markii uu ka soo baxay mugdigii Jaahiliyada oo uu bidhaansaday Iftiinkii Islaamka ayuu quuray naftiisa, wuxuu ahaan jiray mid ku baaqa Diin-la dirir-ka, laakin wuxu isu badalay mid ku baaqa diin-u-dirir-ka, ilaa ugu danbeyn isaga uu is-geeyay fagaaraha, oo nafteediisii uu ku deeqay!.
Mabaadiâ€™diisi Islaamiga aheyd waxey dhaxalsiisay iney ka dhaadhacdo waxa ugu qaalisan uu heysto iney tahay, dhallaankiisa, hantidiisa, adduunyadiisa, naftiisa iyo xaasaskiisa wuxuu yaqiinsaday wax ka mudan inuu heysto, oo dhammaan waxaas uu dhaafsan karo.
Inuu Saalax dharaar cad soo baxo oo gaarigiisa oo miineysan Isteeriga ka soo qabsado, oo ku soo hoggaamiyo halkii uu ku qarxi lahaa, ka dibna uu riixo furaha qaraxa, sidaasna uu ku qarxo, ma noqon karto wax iska caadi ah, ee waa Dacwadii uu xanbaarsanaa oo dhaqaaqeysa, waa Dacwadii uu aaminsanaa oo uu dhaqan gelinayo, waa Dacwadii uu qaatay oo guuleysaneysa!.
Inta mashaariic ee Saalax uu soo galay, 80maadkii ilaa hadda, wuu waayay wax ka muteystay wixii hadda uu ku dhaqaaqay; ma aragyay wuxuu soo dhibsaday? Haa, ma aragyay wuxuu diido? Haa, ma arkay wuxu colaadiyo? Haa, laakin marna ma arag wax nafsaddiisa ka qaalisan oo sidan oo kale uu ugu huro!.
Saalax Badbaado, xittaa intii uu ku jiray maamulka Federaalka, wuu ka dadnimo iyo diin roonaa kooxaha uu la joogay, wax bandanna wuu kala doodi jiray dullinimada ay qaadanayaan, wuxuu diidanaa Shisheeyaha in dalka loo gacan geliyo, wuxuu kale oo uu diidanaa diin la dirirka geedka aan loogu soo ganban.
Imisa ayuu dilay?
Ma dhahayyo tiradaas ayuu dilay, laakin waxaan kuu tilmaamayaa inta bartilmaameed ee uu beegsaday, ka dib adiga goâ€™aan ka gaar tirade uu Saalax Badaado ku dilay howlgalkiisa:-
Â·In qof Xildhibaan soo ahaan jiray uu Al-Shabaab u galo, oo Mashruucooda ka dhaadhiciyaan oo ugu danbeyn is qarxiyo, macnaheedu waxa weeye, wacyigelinta Dawladda Federaalka iyo Wasaaradaheeda waxa loogu yeero Hanuuninta Dadka saameyn ma lahan, waxaana ka xoog badan saameynta Dacwada Al-Shabaab.
Â·In Qof Saalax Badbaado oo kale ah ay gacanta ku dhigaan qeybta Al-Shabaab u qaabilsan Towbadkeenka oo ay noloshiisa maareeyaan oo mashruuc u dajiyaan, ka dibna ay sanado gudahooda ku soo saaraan isagoo ah Aalad dagaal, oo diin u aaminsan waxa uu sameynayo, oo hadane lagu soo weeraro Dawladda Federaalka, waxey muujineysaa mashruuca dhanka Federaalka ee la macaamilka dadka Al-Shabaab ka imaanaya inuu fashil dhex fadhiyo.
Â·In Muqdisho la geeyo Saalax Badbaado oo guri laga dhex dajiyo oo ka dibna bartilmaameedkiisa la soo tusiyo, waayoo nimanka Al-Shabaab waxaan maqlay qof kasta oo meel weeraraya meesha way geeyaan, wuuna iska soo arkaa, hadaba in arrimahaas ka dhex dhacaan Muqdisho, oo shaqsi la yaqaanay uu sidaas sameeyo, waxey fashil ku tahay Wasaaradaha Amniga iyo kuwa isku sheega Sirdoonka oo ay muuqato in aad looga xirfad badan yahay. Ma qiyaasi kartaa guusha ay xaqiijin lahaayeen haddii ay Muqdisho ku qaban lahaayeen Saalax Badbaado oo waliba is qarxin rabay? Hadda sow ma fadhiyaan Guuldarro weyn?.
Â·In Xerada Xalane uu soo weeraro qof ka mid ahaan jiray siyaasiyyiintii juhdiga adag ay ku soo bixiyeen xubnaha beesha Caalamka ee ku dhuumaaleysta Xalane, waxey rajo beel iyo niyad jab ku tahay xubnahaas, oo halkii iyaga ay duulaan u diri lahaayeen lagu soo duullaamay.
Â·In qof Xildhibaan soo ahaan jiray, inta uu ka dhex baxo adduunyadaas oo Aakhiro doorto, ka dibna uu dagaallamo ilaa naftiisa uu huro, waxey guuldarro weyn ku tahay odayaasha qawaarrada ee sokorta iyo cudurrada aan la aqoon ay gallaafanayaan iyagoo wali isku dhajinaya adduunyada oo hadane qaarkood Aakhiro seeg iyo Khaatumo xumo ku dhimanaya.
Intaas oo qeyb iyo dadka ay ka koobnaan karaanba waxaa gallaaftay weerarkii Saalax Badbaado, waa dad nool oo tirada meydadka ku jira!
Qofkii dhaha Saalax Badbaado oo Istish-haadiyo ka galay Muqdisho ayaa beegsanayay halkii xarun ee uu isku qarxiyay been ayuu sheegay, Saalax wuxuu beegsanayay Dawlado, Mashaariic, Muâ€™assasaat, Ururro iyo Afkaar, dhamaantoodna wuu ka guuleystay.
FG: Saalax Badbaado wuxuu sheegay inuu ku saamoobay Iclaamka Al-Shabaab iyo wareysiyadii ay ka soo baahiyeen Istish-haadiyyiinta, dhanka kale, Iclaamka Federaalka iyo Ciyaalka Radio Muqdisho ee ku xiiqay dacaayadaha ma ku darnaa dadka uu gallaaftay Saalax Badbaado? Mayya, waayoo kuwaas markii horeba ma nooleyn!.
Oday Kuffaartii reer Qureysh ka mid ahaa oo la oran jiray Cutba Ibnu Rabiica ayaa lagu aqoon jiray mar waliba talada wanaagsan inuu madaxya-weynta Qureysh siin jiray kol waliba oo ay shir shirqool ah isugu yimaadaan, mar waliba oo talo wanaagsan uu siiyana way caayn jireen.
Maalinkii dagaalka Badar, ayuu aad ugu adkeeyay in dagaal aysan gelin oo mar haddii hantidoodii u badbaaday ay iska laabtaan, balse waa laga diiday, isagiina fuley baa tahay ayaa lagu yiri, markaas ayuu madaxa u ruxay weedh taariikhda gashay oo uu yiri nin la oran jiray Cumeyr Ibnu Wahab, waxey aheyd:
Ø§Ù„Ø¨Ù„Ø§ÙŠØ§ ØªØ­Ù…Ù„ Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙŠØ§ “ “ oo micnaheedu tahay: ” Balaayadu Geeri ayay waddaaâ€
Inta badan madaxya-weyntii Qureysh waxaa gallaaftay dagaalkaas.
Maanta, Qawaarrada 60-jirrada ah ee wali Xildhibaannimada ku jira waxey ka dhigan tahay inuu Saalax Badbaado leeyahay “Balaayada aad ku jirtaan Halaag bey soo waddaaâ€, dabcanna, Badbaado, nasiib wanaaggiisa, wuxuu ku tagay Islaamnimo, wuxuuna ku naseexeeyay dhiiggiisa!
ALLOW u naxariisto adeerkey Saalax oo samir iyo wanaag ka sii ehelkiisa.
Halkan ka Akhriso Maqaalka oo DOC ah
W/Q: Eng Khaliif Muumin
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 29-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 29-10-1437 Hijri.